7 Nzvimbo Dzerudo Pasi Pose | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Italia > 7 Nzvimbo Dzerudo Pasi Pose
Kubva kunhare dzeEuropean nemaguta ekare ekare kusvika kunonakidza Hong Kong, izvi 7 nzvimbo dzekuda pasirese dzinoita kuti rudo rwako rukwire. izvi 7 nzvimbo dzerudo ndiyo mamiriro akakwana echitsauko chinoshamisa mune yako yerudo nyaya, uye kumutsidzira mashiripiti.
1. Ruzhinji rweRudo rweRudo Kuenda Pasi Pose: Paris
Kana iwe ukatsvaga anoreva zvakafanana muduramazwi re "rudo", muchawana Paris yakanyorwa nemavara makuru. Runako rwayo rusingatsanangurike, runako husiku, patisserie, uye akawanda makwapa eerudo mapikicha, Ita Paris imwe yeiyo 7 nzvimbo dzekuda pasi rese.
Kufamba-famba nemunharaunda yakanaka yeLa Marais, kuteerera mimhanzi yemumugwagwa, kana kuve nepikiniki munzvimbo dzakanaka kwazvo, Paris ndiyo muenzaniso wekudanana. Ehe, zvinogona kutadza kushamisika kuti Paris ndiyo yepamusoro honeymoon kuenda mu Europe, uye iwe ungafunge kuti ayo ese erudo mavara anozove akazara akazara. zvisinei, guta rino rakanaka rakazara mavara, uko kwaunokwanisa kuchema rudo rwako, kana kuve neyekushanya-isina snap. Paris hapana mubvunzo iro rekupedzisira rerudo guta, kune vese vakaroorana, mune ese mavara e muraraungu.
Izvo Zvinonyanya Kudanana Zvinhu Zvekuita MuParis
Tenderera uchitenderera Musee Carnavalet, kutsvoda paCanal Saint-Martin, uye unakirwe nepikiniki yerudo pane inoyevedza Champs de Mars nzvimbo.
2. Iyo Yakanakisa Rwendo Kuenda MuItaly: Venice
Ipo Venice iri rimwe remaguta anoshanya kwazvo muEurope, iwe unowana akawanda akavanzika mavara, kupi kwekugovana gelato kana pizza. Mabhiriji eguta anozokutora iwe neako mudiwa kumakona-e-akarohwa-nzira makona, alleys, uye maresitorendi emuno, kwaunogona kudya pane Italian chili, uye tositi yekuda waini yeItaly kana Aperol.
Iyo yakakwana rudo zuva muVenice ichatanga nekuongorora akawanda mabhiriji. ndokubva, unogona kudya pizza ye 2 uye gelato. Zvinokurudzirwa kusiya kushanya kune iyo 2 zviwi zvinonakidza Burano neMurano, kwehafu yechipiri yezuva, mushure mokunge mapoka evashanyi aenda. Nenzira iyi, iwe uchava nezvitsuwa zvese zvako, yemifananidzo yekudanana.
Zvinhu Zvakanakisa Zvekudanana Zvekuita MuVenice
Tenderera uchitenderera Dorsoduro, nharaunda yemunharaunda, kana kudya kuCantina Do Spade, uko Casanova aimbotora kudya kwemanheru. ndokubva, iwe unogona kuve neanodya masikati pane inonakidza Burano chitsuwa, uye unakirwe nekukwira gondola pakuvira kwezuva. Unogona kutanga zororo rako rerudo ne kudanana chitima rwendo kubva kuLondon kana Switzerland kuenda kuVenice.
3. Mahombekombe erudo muEurope: Lake Como
Zuva rave kuvira pane alps, kuratidza mugungwa, uye urikufamba neako mudiwa Pamwe Kufamba kwevanoda, nzira yevanoda muVarenna. Zvirokwazvo unobvuma kuti izvi zvinoita Lake Como isingakanganwike rudo rudo kuenda zverudo kupukunyuka kwe 2.
Pamusoro peguta rinoyevedza reVarenna, Bellagio, uye Vezio inopa maonero anoyevedza eLake Como uye yakawanda nzvimbo dzerudo.
Zvinhu Zvakawanda Zvekudanana Zvekuita MuLake Como
Nakidzwa nerwendo rwekunakisa murudo mumakomo eLari nzira yese yepikiniki yemashiripiti muMonte Crocione. Kana iwe uri murume ane rudo adrenaline, zvino kubhururuka kwechikepe pamusoro penyanza kuchamutsa mapuruguru!
4. Vanoda Nzvimbo muChina: Hong Kong
Modern, zvinofadza, uye fadza, Hong Kong nderimwe remaguta anodanana kwazvo pasi. Masiketi eguta, uye zviwi, ipa inoshamisa maonero mavara emifananidzo iyo inotora rudo rwako. Hong Kong yakanaka pamasikati uye mwenje wehusiku, kuvira kwezuva nekubuda kwezuva, kupa zviitiko zvakawanda zvekudanana, nokuti zororo rekuzorora kwemaviri, kana epic ushingi, kuiisa kumusoro 7 nzvimbo dzekuda pasi rese.
Zvinhu Zvakawanda Zvekudanana Zvinoita MuHong Kong
Zuva rakakwana rerudo rinotanga nechikepe chakatenderedza Victoria Harbor, kana pikiniki muRepulse Bay jecha mahombekombe. Mumasikati, iwe unogona kutora yakavanzika yekubika kirasi, uye pedza nekusimudza magirazi ako kuti ude pakuvira kwezuva.
5. Vanoda Kuenda Pasi Pose: Ositiriya
Ositiriya, nyika yema castles, mapindu anoshamisa, uye maguta en'anga, inzvimbo inozivikanwa yerudo muEurope. Kana iwe uchida kupukunyuka mhomho, ipapo Halstatt ndiyo yakakwana nzvimbo, kuwedzera kune imwe rinoshamisa zuva nzendo kubva kuVienna.
Zvinoshamisa zvisikwa zvinochengeterwa senge Innsbrucker inopa anowoneka maonero emakomo eAustria nemupata, yekukwira kudanana. Pamusoro pe, maguta ekare anoyevedza ayo ari iwo akakwana nzvimbo emufaro-kusingaperi-mushure mengano ngano dzerudo. zvisinei, kana uchida imwe nzira yekuenda kumaguta, ipapo Vienna yakanyatsokwana kwevhiki yekudanana. Uyezve, Vienna ndeimwe ye nzvimbo dzakanyanya-dzakanaka dzeLBBT pasi rese, saka inogamuchira vese vakaroorana, mune chero hukama hwehukama, uye kungomirira iwe neako akakosha mamwe.
Izvo Zvinonyanya Kudanana Zvinhu Zvekuita MuAustria
Zuva rerudo muAustria rinotanga neAustria strudel yekudya kwemangwanani mune cafe yemuno. ndokubva, tungamira kunofamba mubindu reAustria kana nhare. Pamusoro pe, kana iwe uri murume ane mutambo vaviri zvino kukwira muAustria alps, ichave yakanaka.
6. Nzvimbo Dzerudo Pasi Pose: Prague
Petit uye inofadza, Prague ine rudo runotyisa uye zvine kodzero inobata nzvimbo pane yedu 7 nzvimbo dzakanakisa dzerudo munyika. Ehe, yakazara nevashanyi, asi kune akawanda maonero uye mapaki egirini, kunzvera kuwanda kwevafambi, uye uchiri kunakidzwa ne Zvakanakisisa zvekare Prague.
Akanaka madiki mabhawa, mazambuko anoyevedza, uye nharaunda yeMala Strana ndiyo mamiriro akakwana ekudanana. Kunyange Prague iri imwe yenzvimbo dzinozivikanwa muEurope, kune akawanda akawanda akavanzika mavara; inoyevedza Mala Strana nharaunda, uye paki nemaonero eguta, Palacky Bridge, ingori a mashoma eakavanzika rudo.
Izvo Zvinonyanya Kudanana Zvinhu Zvekuita MuPrague
Kufamba-famba muMala Strana, doro parwizi rweVltava, kudya kwemanheru nemaonero eguta, uye mbatya muHemingway bar.
7. Nzvimbo Dzerudo Pasi Pose: Iyo Lake Dunhu MuEngland
Apo nzvimbo yakafuridzira nhetembo dzerudo dzaWilliam Woodsworth, ipapo ndiyo yepamusoro rudo nzvimbo. chaizvo, iwe uchaona kuti nyika yeLake muWest England ine rudo rwakanyanya. Kutenda ku 6 zvisikwa zvisikwa zveChirungu kumaruwa nenzvimbo, uye 16 madhamu anodakadza.
Inowanikwa mudunhu reCumbria, nyika yemakungwa ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa muEngland. saka, kukwira makomo, kumakungwa nemumatata, ndechimwe chezvinhu zvine rudo kuita pasi. Iwe unonzwa kunge urikupinda mune yemashiripiti Jane Austen novel, uko rudo runoshora mhinganidzo dzese.
Nzvimbo Dzakanyanya Kudanana MuCumbria
Gungwa reKeswick, yekukwira kunoshamisa pasi kuenda kupikiniki nedziva. Pamusoro pe, Helvellyn peak, uye iyo mapopoma inzvimbo dzakarota zvachose kune vaviri.
izvi 7 nzvimbo dzekuda inzvimbo dzinotyisa dzekunongedza hukama hwako. pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira iwe kuronga yako yerudo kutiza kune idzi dzinorota uye dzinonakidza nzvimbo dzerudo.
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "7 Mahombekombe Ekuda Pasi Pose" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Flove-destinations-worldwide%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
dzokugara rudo LoveDestinations romanticdestinations RomanticvacationEurope weddinginEurope